Global Voices teny Malagasy » Nahamay indray ny rafitra karapanondro biômetrikan’i India, Rehefa nanaiky ny Google fa nampiditra laharana fiantsoana vonjy tao amin’ny telefônina Android · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Aogositra 2018 5:41 GMT 1	 · Mpanoratra Subhashish Panigrahi Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Maka ny sarin'anakandriamason'ny lehilahy iray ho an'i Aadhaar. Saripika avy amin'i Kannanshanmugam, via Wikimedia Commons. CC BY 3.0
Niditra fiolahana vaovao ny adihevitra amin'ny fahafahan'ny hafa miditra antsokosoko amin'ny fifandraisan'olona manokana rehefa tsy nanaiky hametraka laharana fiantsoana vonjy amin'ireo fitaovana Android-n'ny mpisera maro ny UIDAI — Unique Identification Authority of India [Fahefam-panondroana tokana ao India] — sampandraharaha federaly misahana ny tobin-dahatahirin’ (database) ny kara-panondrom-pirenen'i India, Aadhaar.
Nokinasa hanampy ny mpisera ny laharam-piantsoana ny Aadhaar Sampark Kendra (laharam-pitadiavam-bonjy amin'ny fiteny Hindi) 1-800-300-1947, saingy tsy miasa intsony izany. Nosoloina  tarehimarika efatra 1947 fotsiny izany roa taona lasa izay.
Raha tsy tokony haninona amin'ny ankapobeny ny fisiana laharan'ny olona hafa ao anaty telefônina, dia misy ireo Indiana tsy faly fa tsy nanontaniana ny fankatoavan-dry zareo ny fanovanana ilay laharana ao amin'ny fitaovan-dry zareo. Raha nahita ny sasany fa efa tao ilay laharana hatramin'ny nahazoany ilay fitaovana, ny hafa kosa nitatitra fa nipoitra ilay laharana rehefa nisy ny fanavaozana rindrambaiko.
Izany toe-javatra izany no nahatonga ny olona hiahiay fa mety ho afa-miditra ao amin'ny lahatahiry manokan'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fitaovany ny UIDAI.
Salama ry @UIDAI
Olona maro, samy manana ny orinasany mpanome tolotra avy, manana na tsy manana karatra Aadhaar, misy na tsy misy app mAadhaar tafapetraka ao anatiny, no nanamarika fa efa voapetraka mialoha ao amin'ny lisitry ny olona ifandraisana avy hatrany ny laharan-telefôninareo nefa tsy fantatr'ireo olona ireo izany. Azonareo azavaina ve ny amin'izay?
Rehefa nifanakalo hevitra nandritra ny herinandro tany amin'ireo fampitam-baovao maro sy tany amin'ny media sosialy ny olona, dia nanaiky  ny Google fa “nampiditra tanaty kaody tsinahy ” laharana roa tao anaty Android SetUp Wizard tamin'ny taona 2014 — ny laharan'antso fiantsoana vonjy 112 sy ny laharam-panampiana amin'ny ankapobeny, 1-800-300-1947.
Ny fanamarinana anatiny no nampiseho fa tafiditra anaty kaody tsinahy ho ao amin'ny SetUp Wizard amin'ny famoahana Android tamin'ny taona 2014 — ny laharan'antso fiantsoana UIDAI sy ny antso vonjy 112 nomena ny OEM ho ampiasaina any India ary nitoetra tao hatramin'io taona io.
Miala tsiny izahay amin'izay ahiahy mety ho aterak'izany, ary te-hanome antoka ny rehetra fa tsy ao anatin'ny fidirana tsy nahazoana alalana amin'ny fitaovany Android izay. Afa-manaisotra io laharana io hiala amin'ny fitaovany ny mpisera.
Hiasa izay amin'ny fanitsiana io amin'ny famoahana SetUp wizard izay ho vonona omena ny OEM ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ampiasaina betsaka hanamarinana fanondroana ankehitriny ny rafitra Aadhaar any amin'ireo andrim-panjakana sy andry miahy tena maro dia maro, any amin'ny banky ka hatrany amin'ny fitsaboana ary hatrany amin'ny fandraisana mpiasa. Raha tsy natao ho ampiasaina hijerena ny mombamomba ny olona tsirairay ilay izy, dia mety hivoaka any amin'ny fampiasana betsaka ny rafitra araka ny tokony ho izy (sy tsy araka ny tokony ho izy ), zavamisy izay nampirongatra ny fanahiana fa mirona tsimoramora mankany amin'ny fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana  i India. Noho ny fitomboan'isan'ny trangan-tsy fetezan'ny rafitra hiasa araka ny tokony ho izy sy ny fiporitsahan'ny lahatahiry manokan'ilay olona , dia very fitokisana tamin'ny Aadhaar ny vahoaka.
Tamin'ny ezaka iray hanaporofoana ny tanjaky ny Aadhaar hoan'ny vahoaka, nizara  ny laharany Aadhaar ho hitam-bahoaka tao amin'ny Twitter ny filohan'ny Fahefana Mpandrindra ny Fifandraisandavitra ao India (TRAI), Ram Sewak Sharma, tamin'ny 28 jolay, nanantena fa tsy maninona izany io raha manao toy izany.
Nihantsy ireo mpijirika sy ireo develôpera (mpandrafitra kaody) ihany ka tsy ela dia hitan-dry zareo ny laharana finday, adiresy imailaka sy adiresy fonenan'i Sharma, ny daty nahaterahana, ny laharana zotra an'habakabaka, ny lazaina ho sary miaraka amin'ny fianakaviana iray, ary dia natao ny hanihany nanafatra telefônina natao tamin'ny adiresiny izay nisafidianana fandoavana vola any amin'ny fanaterana azy .
Mbola manohy amin'ny fiarovana  ny Aadhaar ho voaaro amin'ny fiporitsahana sy maharo fiainana an-takonana ihany anefa izy.
Ity angamba no tsara indrindra amin'ny rehetra.
Na dia eo aza ny siokan'ny UIDAI miangavy ny mpisera tsy hampiseho ny laharana Aadhaar ho hitam-bahoaka, nanaraka ny fitarihan'i Sharma i Ravi Shankar Prasad , Minisitry ny Teknôlôjia Elektrônika sy ny Torohay ny Lalàna sy ny Fitsarana, ka nampiseho  ny laharany Aadhaar nandritra ny famoriam-bahoaka iray.
Maherisetra. Niantso an'i @rssharma ihany koa ny Prof Sandeep Shukla. Tsy manankevitra.
Voatsikera  betsaka ny Aadhaar amin'izay lazain'ny manampahaizana manokana ho tsy fahampian'ny haiendrika izay mahatonga ny fiainana antakonan'ny olompirenena Indiana maro ho marefo.
Mety ho marina izany raha raràn'ny lalàna tsy hanontany ny laharana Aadhaar ny banky, tompontany, hopitaly, sekoly, orinasan-telefônina sy aterineto. Fa izay Indiana anontanianao afa-miteny aminao fa anontanian'ireo andry tsy miankina amin'ny governemanta ireo ny laharan-telefôniny ary manana fitoeran-dahatahiry (databases) ihany koa ireo orinasa ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/13/124359/
 nampiditra tanaty kaody tsinahy: https://twitter.com/GoogleIndia/status/1025471136765812737
 tsy araka ny tokony ho izy: https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-concerned-about-misuse-of-aadhaar-data-by-private-firms/articleshow/63495203.cms
 fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana: https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_surveillance
 fiporitsahan'ny lahatahiry manokan'ilay olona: https://www.zdnet.com/article/india-desperately-needs-a-delayed-data-privacy-law/
 fandoavana vola any amin'ny fanaterana azy: https://en.wikipedia.org/wiki/Cash_on_delivery
 Mbola manohy amin'ny fiarovana: https://twitter.com/rssharma3/status/1023978811057229825